Ọtụtụ ugboro ị ga-ahụ onwe gị na a ọnọdụ ebe ị chọrọ ọkụ gị faịlụ ka a CD faịlụ na eleghị anya ị na-adịghị amasị na iji ike windows ma ọ bụ Mac burner. N'ebe a, anyị na-anya na ihe kasị mma 10 uzo ozo si n'ebe maka gị.
Nke a bụ software na-enye gị ka ọkụ a dịgasị iche iche nke faịlụ formats na ala. Na nke a fechaa ngwá ọrụ, otu onye nwere ike ịmepụta na ọbụna ego diski oyiyi nke dị iche iche formats gụnyere .iso, .cue, .bin, .img na ọtụtụ ndị ọzọ. All ihe oyiyi ndị a nwere ike ọkụ ka CD, DVD na Blu-Ray seamlessly nyere na software ka nwetara a nnọọ enyi na enyi interface. Ị nwere ike ibudata software si http://www.imgburn.com/ n'efu!
2.Explore & Ọkụ 1.6
Nke a bụ fechaa software na a ga-ike n'ihi na windo ọrụ. Dị ka onye ọrụ, ya mfe ga itu n'anya ị na ihe niile ị chọrọ ime bụ nri pịa nchekwa / faịlụ ị ga-achọ ọkụ na a click on apa ọkụ faịlụ ka video diski nhọrọ-eduzi a ọkachamara na-esure gị faịlụ. Download a software si http://www.exploreburn.com/ na-enwe ya uru.
Nke a bụ free ngwá ọrụ na n'ihi na n'aka ga-adịghị anya free ọ bụla ọrụ. The ngwá ọrụ e wuru na nza nke atụmatụ onye ga na-atụ anya na-ahụ na azụmahịa ọkụ software. Ọ bụkwa a dị mfe iji ngwá ọrụ na ị naanị iji ịdọrọ na dobe faịlụ n'ime software na ị dị njikere na-aga. Lelee n'ihi na nke a software na http://www.tinyburner.com/
Nke a bụ ihe ọhụrụ apa ọkụ software na-ekwusi ike na nguzozi n'agbata ala na izu ezu-ọ bụ zuru ezu n'echiche bụ na e mere ya n'ihi na ma azụmahịa na n'ụlọ ọrụ. Ọ bụ otu oké ngwá ọrụ na-eburu n'uche na ọ bụ free on http://www.burnaware.com/.
5. Nero-ere Ọkụ Rom
Nke a dị ike software bụ ngwaahịa nke otu ụlọ ọrụ na kemgbe a ide na apa ọkụ ahịa. N'ezie nke ahụ bụ a gbakwunyere ma ọ bụrụ na ọ bụghị iji mee ka ị na-azụta ngwá ọrụ a mgbe ahụ ka m mara mma n'aka na ị ga-wooed site na ya atụmatụ. Ị nwere ike dọwara audio si CD na tọghata audio adịghị echefu na ị nwekwara ike data ọkụ na nke a CD nwere ike idi scratches. Ị ga-maa idem site na nke a software. Zụrụ ya si http://www.nero.com/enu/products/nero-burning-rom/why-buy-nero-burning-rom.php.
A bụ ihe ọzọ na-akwụ ụgwọ software na ga-afụ-emetụta gị na ya ọdọ mmiri nke ike. Ọ bụghị naanị ejedebeghị na-ere ọkụ gị faịlụ na ultrafast gbapụrụ ọsọ ma ọ na-egosi na ụfọdụ nti atụmatụ n'ụdị nkwado maka ofu-transfer nke faịlụ site na gị na kọmputa na ngwaọrụ dị ka ipods, PlayStation na nza nke ala. Ndị na ọtụtụ ndị ọzọ uru nwere ike zụta si http://www.dvdnextcopy.com/dvd-next-copy-next-tech/ na gburugburu 20 $.
Ngwá ọrụ a dị maka ma Mac na Windows ọrụ n'efu ruo a ikpe oge. Ọ na-ekwe ka ị na-ịdọrọ na dobe faịlụ ka onye ọrụ interface na ọkụ gị DVD, CD ma ọ bụ BLU-ray. Ọ na-ekwe ma ọdịyo na video ndekọ na-enweghị ikwere nke àgwà na n'ógbè nke ọdịyo faịlụ. Ọ na-ekwe ihe dị iche iche formats dị ka WAV, mp3, ogg, wma na nza nke ndị ọzọ. Otu nwere ike kwuru nke na-akwado video formats. -Zuru ikike ka software ịzụ ịzụta ya si http://www.nch.com.au/burn/index.html.
8. Sothink Movie DVD Onye kere
Ọ bụrụ na ị na-achọ free na-ewu ewu software na-enye gị ike elu àgwà CD si gị nkiri mkpachị mgbe ahụ ị dị nnọọ hụrụ otu. Ọ nwere ike ijikwa a dịgasị iche iche nke video na ọdịyo formats nakwa tinyere site mkpebi siri na mmepụta video mkpebi. Ị nwere ike bulie software si http://www.sothinkmedia.com/movie-dvd-maker/
9.Ashampoo-ere Ọkụ Studio 14
Nke a software anọwo na ogologo oge iji merie na ntụkwasị obi nke ọtụtụ. Ọ bụ a ọkachamara chụpụrụ ngwá ọrụ na-boosts dị mma na-arụ ọrụ interface maka ya ọrụ. Ya atụmatụ nwere N'ezie uru 50 $. Ịzụta a oké software si https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/4010/burning-software/Ashampoo-Burning-Studio-14.
Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, e nwere CyberLink Power2Go 8. Talk nke oké ọrụ interfaces na ọtụtụ ndị ngwaọrụ on ndepụta a ga-adabaghị na ụkpụrụ setịpụrụ a software. The software dị ukwuu na-eke intros maka CD oru ngo na ikike maka ọrụ encrypt data na ike slide na-egosi. Ọ ga-eri gị gburugburu 55 $ inwe a software si http://www.cyberlink.com/products/power2go-platinum/features_en_US.html?&r=1.
Top 15 akporo ekwentị ndabere Software & égwu